Dowlada Sucuudiga oo war ka soo saartay weerar shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada Sucuudiga oo war ka soo saartay weerar shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowlada Sacuudiga ayaa lagu cambaareeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee isniintii lala eegtay ciidan u dhashay dalka Talyaaniga oo qay ka ahaa saraakiisha Midowga Yurub ee Soomaaliya ku sugan.
Weerarkan ayaa dhacay kadib amrkii gaari uu kaxeynayay ismiidaamiye Al Shabaab ka tirsan uu qarax la helay mid ka mid ah gaadiidka kolonyada ahaa oo ay lasocdeen ciidanka Talyaaniga kuwaasoo marayay agaarka wasaarada difaaca Soomaaliya.
Laba qof oo mid uu yahay ismiidaamiyihii ayaa ku geeriyootay, 10 kale oo ay ku jiraan arday xilligaasi ka soo baxay goobahood waxbarashadana waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan.
Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowlada Sacuudiga ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxaasi, wuxuuna soo kabasho deg deg ah u rajeeyay dadka ay dhaawacyadu soo gaareen.
War-saxaafadeedka wasaarada arimaha dibada Sucuudiga waxaa kaloo lagu sheegay in xukuumada Ryadh ay ka soo horjeedo dhammaan noocyada rabshadaha, sida argagixisada,xagjirnimada iyo wax kasta oo lagu dhibaateynayo dadka shacabka ah.
Sacuudiga ayaa ugu dambeyn sheegay inuu kordhin doono taageerada Millatari iyo mida dhaqaale ee uu siiyo dowladda Fadraalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), si looga adkaado ururka Al Shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada dowlada iyo saaxiibadooda caawinaya.
Afhayeenka dhinaca hawlgalada ururka Al Shabaab C/casiis Abuu Muscab oo qaraxan ka hadlay ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen ilaa Afar sarkaal oo caddaan ah, isagoo sidoo kale Tilmaamay in weerarkana uu u dhacay sidii ay doonayeen.
← Dugsiyada dalka oo lagu wareejiyay 15.4bilyan oo shilin
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo sheegay in Soomaalidu ay isku raacday nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa. →